Losartan (လိုဆာတန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Losartan (လိုဆာတန်)
Losartan (လိုဆာတန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Losartan (လိုဆာတန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Losartan (လိုဆာတန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Losartan ကို သွေးတိုးရောဂါကို ကုသရန်နှင့် ဆီးချိုကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ သွေးတိုးလူနာများနှင့် နှလုံးကြီးနေသော လူနာများတွင် လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ သွေးတိုးရောဂါကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် လေဖြတ်ခြင်း၊ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ခြင်း နှင့် ကျောက်ကပ်ပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ losartan သည် angiotensin receptor blockers အုပ်စုဝင် ဆေးတမျိုးဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည် သွေးကြောများကို ကျယ်စေခြင်းဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထား အတွက် losartan ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
losartan ကို နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့သည့် ရောဂါတွင်လည်း သုံးနိုင်သည်။
Losartan (လိုဆာတန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
losartan ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ တနေ့လျင် တကြိမ် သို့မဟုတ် သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သောက်နိုင်သည်။ ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆေးရည်အသုံးပြုပါက ဆေးပမာဏကို မတိုင်းတာမီ ဆေးပုလင်းကို ကောင်းစွာလှုပ်ပါ။။ ဆေးနှင့်အတူပါလာသည့် ဇွန်းသို့မဟုတ် ခွက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏကို တိုင်းတာပါ(အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးရပါ)။ တိုင်းတာရန် ပစ္စည်းမရှိပါက ဆေးဆိုင်တွင် တောင်းယူပါ။ ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင် ကောင်းသွားပြီဟု ထင်မှတ်စေကာမူ ဆေးကို မှန်မှန်ဆက်သောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သွေးတိုးရောဂါရှိသူအများစုမှာ အကောင်းပကတိပင်ဖြစ်သည်။ သင့်ရောဂါ အခြေအနေ မသက်သာလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးလာလျှင်ဖြစ်စေ (ဥပမာ။ ။ သွေးပေါင်ချိန် တက်မြဲတက်နေဆဲ သို့မဟုတ် ပိုတက်လာခြင်း ) ဆရာဝန်ကို အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Losartan (လိုဆာတန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Losartan ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ losartan ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ losartan ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Losartan ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Losartan ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Losartan (လိုဆာတန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
losartan ကို မသောက်သုံးမီ
=သင်သည် losartan သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများ သို့မဟုတ် losartan တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြပါ။losartan ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။
=သင့်တွင် ဆီးချိုရှိလျှင် သို့မဟုတ် aliskiren (tekturna, in amturnide, tekturna hct) များ သုံးစွဲနေလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ အဆိုပါ အခြေအနေများရှိပါက သင့်ဆရာဝန် အနေဖြင့် သင့်အား losartan သုံးစွဲခိုင်းမည်မဟုတ်ပါ။
=သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ဗီတာမင်အားဆေး၊သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။ အောက်ပါ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ။
aspirin သို့မဟုတ် NSAIDs (nsaids) —-> ibuprofen (advil, motrin) and naproxen (aleve,
naprosyn), and selective cox-2 inhibitors —–>celecoxib (celebrex); ဆီးဆေးများ——>
potassium-sparing diuretics များ ဖြစ်ကြသော amiloride (midamor, in hydroride,
in moduretic), spironolactone (aldactone, in aldactazide), and triamterene (dyrenium,
in dyazide, in maxzide); fluconazole (diflucan); lithium (eskalith cr, eskalith, lithobid);
phenobarbital; potassium supplements; and rifampin (rifadin, rimactane).
သင့်ဆရာဝန် အနေဖြင့် losartan ၏ ပမာဏကို ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
=သင့်တွင် နှလုံးကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်သည့်ရောဂါ သို့မဟုတ် အသည်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ် ရောဂါများ ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြပါ။
=မိခင်နို့တိုက်နေပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြပါ။
=losartan သည် မူးဝေခြင်းကို ဖြစ်စေသည့်အပြင် အိပ်နေရာမှ ရုတ်တရက်ထလိုက်လျှင် သတိလစ်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် losartan ကို စတင်သောက်သုံးချိန်တွင် အဖြစ်များပါသည်။ ထို့ကြောင့် လှဲနေရာမှ ထလျှင် ရုတ်တရက် မတ်တပ်မရပ်ဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ခြေချပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ခေတ္တထိုင်နေသင့်ပါသည်။
=ဝမ်းလျှောခြင်း၊အန်ခြင်း၊ရေလုံလောက်စွာ မသောက်ခြင်း နှင့် ချွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်းတို့သည် သွေးပေါင်ချိန်ကို ကျစေနိုင်ပြီး မူးဝေခြင်း နှင့် သတိလစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် အဆိုပါပြဿနာများ မူလကတည်းကရှိလျှင် သို့မဟုတ် ဆေးသောက်နေရင်း ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Losartan (လိုဆာတန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Losartan (လိုဆာတန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရ ခက်ခဲလာခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းတို့ ရောင်ရမ်းခြင်း အစရှိသော ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားလာရပါက အရေးပေါ်ကုသမှုကို ခံယူရပါမည်။ ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို losartan သည် ခြေလက်တို့ရှိ ကြွက်သားများ ပျက်စီးပြီး ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သည့် ပြဿနာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် အကြောင်းအရာ မည်မည်ရရမရှိဘဲ ကြွက်သားများနာခြင်း၊တင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း အထူးသဖြင့် အဖျားတက်ခြင်း၊မူမမှန်စွာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ဆီးအရောင်မည်းခြင်းတို့နှင့် တွဲလျက် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ဆရာဝန်ကို အမြန် အကြောင်းကြားပါ။
အောက်ပါ အချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ဆရာဝန်ကို အမြန် အကြောင်းကြားပါ။
=ဆီးနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးလုံးဝမသွားတော့ခြင်း။
=သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်များခြင်း (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းအားနည်းခြင်း၊ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း၊ထုံနာကျဉ်နာဖြစ်ခြင်း)။
=ဖျားခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊နှာစေးနှာပိတ်ခြင်း တို့ကဲ့သို့သော တုပ်ကွေးလက္ခဏာများ၊ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ကြွက်တက်ခြင်း၊ခြေထောက်များ နာခြင်း၊နောက်ကျောနာခြင်း၊ဗိုက်နာ/အောင့်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်မပျော်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Losartan (လိုဆာတန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Losartan ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
=အက်စ်ပရင် သို့မဟုတ် အခြားသော NSAID များ (ဥပမာ။ ။ ibuprofen (advil, motrin), naproxen (aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicam နှင့် အခြားဆေးများ)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Losartan (လိုဆာတန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Losartan က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Losartan (လိုဆာတန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Losartan ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
=အခြားသော သွေးကျဆေးများ (ဥပမာ။ ။ benazepril, enalapril, lisinopril, Lotrel, Vasotec, Zestoretic, Zestril)နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ——> ဓါတ်မတည့်ခြင်း များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
=Congestive heart failure ဟုခေါ်သော နှလုံးရောဂါတမျိုး —–> ဤအခြေအနေတွင် losartan ကို အသုံးပြုပါက ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေမည်။
=aliskiren (Tekturna) ကိုပါ သုံးစွဲနေရသော ကျောက်ကပ်လူနာများ —-> ဤလူနာများတွင် မသုံးစွဲသင့်ပါ။
=Electrolyte ဓါတ်များ မမျှမတဖြစ်ခြင်း (သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ် သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်ဓါတ်များ တက်ခြင်း၊ကျခြင်း စသည်) —–> အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်သဖြင့် သတိနှင့်သုံးပါ။
=အသည်းရောဂါ (အသည်းခြောက်ခြင်း အပါအဝင်) —–> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Losartan (လိုဆာတန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ losartan ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
=ကနဦးဆေးပမာဏ : ၅၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
=ဆက်လက်သောက်ရန်ဆေးပမာဏ : ၂၅ – ၁၀၀ မီလီဂရမ် ကို တကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် ခွဲသောက်နိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Losartan (လိုဆာတန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ)
=အသက် ၆နှစ်နှင့် အထက် : 0.7 mg/kg ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်သောက်ရမည်။ (အများဆုံးသောက်နိုင်သော ပမာဏမှာ ၅၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်)။
Losartan (လိုဆာတန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
losartan ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
=သောက်ဆေးပြား : ၂၅၊ ၅၀၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်။
Losartan ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
https://www.drugs.com/losartan.html. Accessed June, 27, 2016.
Losartan (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/losartan- oral-route/description/drg-20067341. Accessed June, 27, 2016 https://www.drugs.com/losartan.html. Accessed June, 27, 2016.
ဒေါသသိပ်မထွက်နဲ့ ဝိတ်တက်လာမယ်နော်… သတိထား!
Monsoon Fruits လို့ခေါ်တဲ့ တုပ်ကွေးရာသီမှာ စားပေးသင့်တဲ့ အသီးအနှံများ ။ ။
တစ်နေ့ကို ဆားဘယ်လောက် စားလို့ရလဲ
ညဘက်ဆီးခဏခဏသွားတာက သွေးတိုးရောဂါအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ သတိထား!